आत्मअनुशासन: स्वस्थ र खुसी जीवनको राज - Diet Khabar
आत्मअनुशासन: स्वस्थ र खुसी जीवनको राज
जब हामी आत्मअनुशासित हुन्छौं, जीवन धेरै हदसम्म सार्थक हुन्छ । आत्मअनुशासन भनेको आफुले आफैलाई निश्चित सर्त र सीमाभित्र बाँध्नु हो । आत्मअनुशासनले हामीलाई आफ्नो जीवनमा, घर-परिवारमा, करियरमा, स्वास्थ्यमा फाइदा गर्छ ।
खानपानमा पनि हामी अनुशासित हुनुपर्छ । कुन खानेकुरा शरीरका लागि आवश्यक छ ? कति आवश्यक छ ? यसबारे हामी कहिल्यै चिन्तन गर्दैनौं । बरु मिठो मसिनो खाने बाहना खोजिरहन्छौं । यस्तो अस्तव्यस्त खानपान शैलीले शरीरलाई रोगी बनाउँछ । खानपानको निश्चित तालिका निर्धारण गर्नुपर्छ । दिनमा कति पटक खाने, के के खाने भन्ने कुरा निर्धारण गर्नुपर्छ ।
Previous articleगर्भ रोक्ने मिनी पिल्स, ३५ वर्ष भन्दा माथिका महिलाका लागि
Next articleभुटेको मकै : पोषिलो र स्वादिलो खाजा